डा गोविन्द केसीको विषय राष्ट्रसंघमा पुग्यो, के हो चेन्ज डट ओआरजी ?::Pathivara News
डा गोविन्द केसीको विषय राष्ट्रसंघमा पुग्यो, के हो चेन्ज डट ओआरजी ?
काठमाडौ सत्याग्रही डा गोविन्द केसीको आमरण अनसनको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि पुगेको छ। अमेरिकाको बोष्टनस्थित सामाजिक अभियन्ता एवं स्रष्टा शिवप्रकाशले डा.केसीको प्राण रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट संघीय मानवअधिकार आयोगसमक्ष अपिल गरेका गरेका हुन्।
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न बनेको अध्यादेश बिना संसोधन विधेयकका रुपमा ल्याउन माग गर्दै डा.केसी १५ औं पटक फेरि अनसन बसेका छन् ।
१९ दिनदेखि आमरण अनसनमा रहेका उनको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।
यस साइटमार्फत् विगतमा अपिल गरिएका चर्चित विषयहरु आर्थिक र न्यायिक, मानवअधिकार, शिक्षा, वातावरण, संरक्षण, पशुअधिकार, स्वास्थ र दिगो खाद्य लगायत छन् ।